Networking Lessons PowerPoint Files — MYSTERY ZILLION
Networking Lessons PowerPoint Files
July 2008 edited February 2009 in Networking
အင်တာနက်ထဲက ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ PowerPoint ဖိုင်တွေပါ...
အသုံး၀င်မယ်ထင်တဲ့သူတွေ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်...
စာအုပ်ထူုကြီးတွေဖတ်နေရတာထက်တော့ သက်သာကောင်းပါရဲ့.... :P
Download2MB, PPS file, Fileden
Download 1.5 MB, PPT file, Fileden
Download 2.6 MB, PPT file, Fileden
Business Data Communication, 4th Edition
စာအုပ် အကြောင်း ရှင်းပြထားတဲ့ ပါ၀ါပွိုင့်ဖိုင်တွေပါ...
ဖိုင်ပေါင်း ၂၀ ပါတဲ့ ရွှေထုပ်လေးပေါ့ ...
Download 1.4 MB, RAR, Fileden
ပါ၀ါပွိုင့် ဖိုင်ကလေးတွေက ကောင်းပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးရှင်းထားတာပါ။ ဒါလေးထိုးပြီး စာသင်လို့ကောင်းမယ့်ပုံပဲ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပိုပြီးနားလည်တဲ့သူက ကိုယ့်လောက်အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့သူတွေကို ဒါလေးတွေအထောက်အကူနဲ့ ရှင်းပြပေးနိုင်ရင် အတော့်ကို အကျိူးများမှာပါ။ ကျေးဇူး...။
William Stallings ရေးသားထားတဲ့ ..
Computer Orgazination & Architecture, 7th Edition ဆိုတဲ့ စာအုပ်အတွက်...
Download 6.7 MB, RAR, Fileden
Chapter နံပါတ်.. ဆလိုက်နံပါတ်တွေကို အတိအကျ ရည်ညွှန်းပြီး ...
ကိုယ်က ဘယ်လိုထင်တယ်.. အမှန်က ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ.. စသည်ဖြင့်...
သိတဲ့သူတွေကို ရှင်းပြပေးဖို့ အကူအညီတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.... :67:
William Stallings ရေးတဲ့ နောက်ထပ် စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ...
Computer Networks with Internet Technology လို့ အမည်ရပါတယ်...
Download 5.3 MB, RAR, Fileden
အားလုံး ပညာအရာမှာ ဆထက်ထမ်းပိုး စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ.. တိုးတက်နိုင်ကြပါစေ... :67:
Cryptography and Network Security စာအုပ်ပါ..
ကွန်ရက်လုံခြုံမှုနဲ့ ၀ှက်စာရေးနည်း/ဖော်နည်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ဖြစ်ပါတယ်...
Download 5.1 MB, RAR, Fileden
စိတ်၀င်စားသူများ.. ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်သူ/ကျောင်းတော်သားများ အတွက်
တနည်းတဖုံ မှီငြမ်းကိုးကားဖွယ်ရာ ရတန်ကောင်းပါရဲ့... :5:
ေ၀း .... ပြန်ပေါ်လာပလားဗျ။ :d
မေ၀းပါဘူး နီးပါတယ်... ပိုနီးသွားတယ်..
everlearner wrote: »
ကျွန်တော် ဖုန်းဆက်ဦးမယ် ညနေတိုင် ရုံးအပြန်နောက်ကျနေလို့ဗျ .. မဆက်ဖြစ်ဘူး။
အင်း ..........ကောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလား မသိဘူး...:39:
ဟီးနောက်တာနော်။ အနော်စက်ထဲမှာ Microsoft office ပြန်မတင်ရသေးဘူးဂျ။ CD မရှိလို့။
၄ ခုတော့ DL လုပ်ပီးဘီ။ စေတနာနဲ့တင် ကောင်းမှန်းယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။
ဘယ်သူမှ မကောင်းတဲ့ဟာ ကို ကိုယ်အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး မတင်ပါဘူး။ Mz member only နော်...
white hacker တွေကိုပြောတာ။ စိတ္တဒုက္ခိတ တွေကိုတော့မပြောဘူး။ သူတို့ဆို ဘာမှကိုမပြောတာ၊ တော်ကြာပြောလိုက်မှ ကိုယ့်စက်ကို Attack လုပ်နေ ကိုယ်ပါဒုက္ခ(စ်) ဖြစ်နေမယ်:P
ကဘီဟုတ်ဟာ ခုတလော အပြီလုပ်နေပါလား .. ဟိုနားလဲ ၀င်ရေး ဒီနားလဲ ၀င်ရေး ..အားလုံးသူ့ အရေးတွေချည်းဘဲ .. ဒို့အရေးတော့သွား မလုပ်နဲ့နော် .. :68:
ကျွန်တော်တော့ ...PowerPoint Viewer လေးနဲ့ ကြည့်နေတာပဲ။ စိတ္တဒုက္ခိတ ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဗျာ...။ စိတ်ဒုက္ခသမားတွေကိုပြောတာလား...။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရန်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ mental conflict တွေကိုပြောတာလား။
၀ုတ်ကဲ့ ၀ုတ်ကဲ့ ဟီး :d သားသားကြောက်ကြောက်
အပ်ဒမင်ကပြောနေဘီ ဒီနေ့တော့ထပ်မရေးတော့ဘူး.ဟီး သားသားကြောက်ကြောက်
စိတ်ဓါတ်ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြောတာပါ။ mental handicapped ဖြစ်နေတဲ့သူကိုပြောတာပါ။
www.4shared.com မှာ ကြိုက်တဲ့ စာအုပ် Download လုပ်လို့ရတယ်။။။။
networking powerpoint တွေလဲရှိတယ်။။။
Cisco powerpoint တွေလဲရှိတယ်။။။။
Network သမားသည် ပင်ပန်း၏။။။။။။ အနှိမ်ခံရ၏ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။ သောက်သုံးမကြရင် ပြောခံရ၏ ။။။။။။။
Network သမားသည် ပင်ပန်း၏။။။။။။ အနှိမ်ခံရ၏ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။ သောက်သုံးမကြရင် ပြောခံရ၏
inn I am sure you are right about that because I was firstaprogrammer but at my time programmers have no place to work and not much salary gets therefore I moved networking and now I am like you told. If emails late or not reached to our server users complaint to me but they don't know I am notapostman.:)):)):)):)):)):))
Books လေးတွေတင်ပေးတာ ကောင်းပါတယ်
Network security နဲ့ပတ်သက်ပီး project လုပ်စရာရှိလို့ ပါ
ရှိရင် ကူညီကြပါဦး :106::106::106:
power point files တွေ dowlload လို့မရဘူးဟ
ကျွန်တော်ကတော့ ....ေ၀းနေတာကို နီးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ......:77:
I really thz eveverlearner Crypt4e Power Point File does really help me while writing my thesis book... I want to help anyone who wants to learn about crypto though I am not that expert....
witch83 wrote: »
I do thanks to everlearner for sharing to your knowledge.:5:
can you explain more about " Security +"
nwaiken wrote: »
I don't know about "Security +" much.
If u want the Book, I think I can help.
I'm still trying to learn Security, it isawide field to study from Home PC to Web, Enterprise. :71::71::71:
I can't download the file uploaded in www.4shared.com can you change the link.
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ www.4shared.com မှာ ဖိုင်တွေ တစ်ခါမှ မတင်ဖူးဘူး ခင်ဗျ.. :71::71::71:
တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုတ် လုပ်လို့ရတဲ့ www.fileden.com မှာပဲ တင်တာများပါတယ်...
လိုချင်တဲ့ စာအုပ်ရှိရင်လည်း ပြောပါ...
MZ မှာ ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကိုတော့
ွှ့Thank you so much:5:
အစ်ကိုရေ down လို့မရဘူး:((
myominnzaw wrote: »
ညီလေးက အင်တာနက်ကို ဘယ်ကနေ သုံးနေတာလဲ
ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံးကို စုစည်းပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
အရင်ဖိုင်တွေလည်း Links တွေ ကောင်းနေပါသေးတယ်...
allnetppt.zip (23.60 MB)
ကွန်ပျုတာ၊ အိုင်တီ၊ Physic နဲ့ အီလက်ထရောနစ်ကျောင်းသားတွေ အတွက် အသုံး၀င်တဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Digital Fundamentals အတွက် Powerpoints တွေ ရှိတဲ့ နေရာပါ...
တိုင်၀မ် - Department of Computer Science and Engineering at University of Yuan Ze က ဖြစ်ပါတယ်
CCIE Fundamentals Network Design.rar
Cisco & IP Addressing .zip
CCIE Routing an Switching .rar
Sybex - CCNP - Routing Study Guide.rar
ကွန်ပျုတာ၊ အိုင်တီနဲ့ အင်ဂျင်နီယာ မောင်နှများအတွက် အသုံး၀င်နို်င်မယ့်
အသုံး၀င် အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ... :):)